चिप्स उत्पादक कम्पनीकाे मर्जरले इन्टेलकाे व्यापार साँगुरिएला ? | Investopaper
चिप्स उत्पादक कम्पनीकाे मर्जरले इन्टेलकाे व्यापार साँगुरिएला ?
कम्प्युरटरको चिप्स उत्पादक कम्पनी एएमडी र झिलिङ्क्स कम्पनी एक आपसमा मर्ज भएका छन् । एएमडीले झिलिङ्क्सलाई ३५ अर्ब डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो खरिदसँगै अर्को विश्व प्रसिद्ध चिप्स उत्पादक कम्पनी इन्टेलसँगको प्रतिस्पर्धा अरु तिब्र हुने अनुमान गरिएको छ । झिलिङ्क्सलाई एएमडीमा गाभेसँगै यसको शेयर बजारको अनुपात पनि टुंगो लागेको छ । झिलिङ्क्सका शेयरधनीले अब प्रतिशेयर १.७२३४ प्राप्त गर्ने छन् । एएमडीको शेयर हिस्सा ७४ प्रतिशत रहनेछ भने झिलिङ्क्सको करिब २६ प्रतिशत हुनेछ ।
एएमडीका प्रमुख कार्यकारी डा लिसा सू ले संयुक्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन । पेङ भने एएमडीको अध्यक्ष रहने छन। र झिलिङ्क्स तर्फको व्यवसाय र रणनीतिक वृद्धिका बारेमा नेतृत्व लिने सहमती भएको छ ।
यो सम्झौतालाई अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा पूर्ण कार्यान्वयन भइसक्ने छ । यो सम्झौतालाई दुबै कम्पनीका शेयरधनीहरुले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । यता इन्टेलको तैमासिक रिपोर्टमा उसको नाफामा २९ प्रतिशतले गरिवट आएको देखिएको छ । लगार स्टक मार्केटमा देखिएको गिरावटका कारण इन्टेलको बजार मूल्य १० प्रतिशतले गिरावट भएका कारण कम्पनीको आम्दानीमा असर परेको हो ।
कम्पनीको सम्झौता सम्पन्न भएपछि १.७ बिलियन नगद दिइएको छ भने यो सम्झौता सम्पन्न गरेर दुई कम्पनीको एकिकृति कारोबार हुन २०२१ को अन्त्यसम्ममा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
← बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय फोटो प्रदर्शनीमा नेपाल ‘थिम कन्ट्री’
सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट ३६ हजार जनाभन्दा बढीले लिए लाभ →